မွေးကင်းစကလေးများ၏ပြီးသားတစ်ဦး '' ဟောင် | Apg29
Aftonbladet ရေးသားခဲ့သည် :
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နယူးယောက်မြို့တတိယဥပဒေရေးရာကျားမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာ "X" ကိုကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဘယ်ယောက်ျားမိန်းမမျှအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်သူမွို့တှငျလူများ၏အသက်အရွယ်ယခုသူတို့ရဲ့ကျားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါက form မှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုဖန်ဆင်းကြောင်းအလေးအနက်ပြုနေသည် "သူတို့စစ်မှန်တဲ့ကျားမဝိသေသလက္ခဏာကိုရောင်ပြန်ဟပ်," USA Today ရေးသားခဲ့သည်။
"ဟု New York မှာအားလုံး trans ဆိုတဲ့နှင့် Non-binary ရန်: ငါတို့သည်သင်တို့စကားကိုနားထောငျ, သငျသညျကိုမွငျနှငျ့သငျလေးစားပါတယ်။ 2019 ကနေ, ရှိသမျှနယူးယော့ M က, F ကိုသို့မဟုတ် X ကိုသူတို့ရဲ့ကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်ပေါ်တွင်သူတို့ကျားမပြောင်းပေးဖို့ - ဆေးပညာလက်မှတ်မပါဘဲ, "Twitter တွင်မြို့တော်ဝန်ဘီလ်က de Blasio ။ M က "လူ" က F ရဲ့ "မိန်းမ" (အမျိုးသမီး) သည်နှင့် X ကိုသစ်ကိုကြားနေ, လိင်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့သည်ဤသူတို့ကိုတနေ့ထက်တနေ့ခံစားရပုံကိုပေါ် မူတည်. , တနေ့ကဖို့အခြားသူများအားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တတိယဖို့ "X" ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသလား? ကမ္ဘာကြီးကိုရှုပ်ထွေးပါ!
ငါသည်သင်တို့လူမျိုးအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ရှိရာ ratsit.se အထဲမှာတစ်ဦးအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျအထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို, ဒါပေမယ့် "ဥပဒေရေးရာကျား" မှန်လျှင်အဘယ်သူမျှမ "လိင်" ရှိပါသည်။ သူတို့ကအယူအဆပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်နည်းအတွက်ရှိသည်။
ဤသည်ကိုလည်း "ဥပဒေရေးရာကျား, မ" နှင့် "လိင်" အတူတူပါပဲမပါသောအခါဆိုလိုသည်။ "ကျား" သင်နှင့်အတူမွေးဖွားလာကြရာတစ်ခုခုသည်နှင့် "ဥပဒေရေးရာကျားက" အဖြစ်မှန်နှင့်အတူလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်ပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့တစ်ခုခုပါပဲ။
ယနေ့မပြုမီ, ငါသူမမှားကျား, မအတူမွေးဖွားနေသည်ထင်သူဆငျးရဲသား 26 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး Louis သဲအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့၏။ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ: သငျသညျမှားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့လျှင်သင်သည်နောက်တဖန်မွေးဖွားနိုင်ပါတယ် ။
ကျနော်တို့လူတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာယရှေုသညျအဘို့ထိုသူတို့အနိုင်ရနှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ သူကသူတို့သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုစုစည်းပြီးနှင့်မှန်ကန်သောဝိသေသလက္ခဏာအရ။
မိစ္ဆာလိင်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်များအပေါ် foisted လျှင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်။ New York မှာမိဘများမှာလည်းမိမိတို့၏မွေးကင်းစကလေးကပေါ် "X" ကိုမသတ်မှတ်ပေမည်။ ဘယ်လိုရွားလှ! ကလေးတစ်ဦး "ဖြစ်သူ" ဖြစ်ခြင်း၏သူ၏အသက်တာကစတင်ခဲ့သည်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာနှင့်သူတို့သူ့ကိုယူစေခြင်းငှါဒါသူတို့ကိုသညျယရှေုပေးပါ။ ထိုအခါသူတို့ကတစ်ဦး '' ဟောင်း '' လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်ထိုအခါသူတို့သည်အလုံခြုံသဟဇာတလူဖြစ်ရမှတက်မပေါက်ပါဘူး။